Menu	HomeGuestbookToday in HistoryNews & Blog FeedsContact Us	သံလွင်အိပ်မက် [Latest]	မျက်နှာဖုံးနှင့် အမှာစာမာတိကာစာဖတ်သူတို့ပေးစာများကဗျာများကာတွန်းများဟာသဆောင်းပါးများအက်ဆေးများဝတ္ထုတိုများပေးစာအင်တာဗျူးစာအုပ်စင်သို့ ကိုသံလွင်ဗေဒင်	သံလွင်အိပ်မက်အဟောင်းများ	အတွဲ(၄) အမှတ်(၁)အတွဲ(၃) အမှတ်(၄)အတွဲ(၃) အမှတ်(၃) (အထူးထုတ်)အတွဲ(၃) အမှတ်(၂)အတွဲ(၃) အမှတ်(၁)အတွဲ(၂) အမှတ်(၃)အတွဲ(၂) အမှတ်(၂)အတွဲ(၂) အမှတ်(၁)အတွဲ(၁) အမှတ်(၁၁)အတွဲ(၁) အမှတ်(၁၀)အတွဲ(၁) အမှတ်(၉)အတွဲ(၁) အမှတ်(၈)အတွဲ(၁) အမှတ်(၇)အတွဲ(၁) အမှတ်(၆)အတွဲ(၁) အမှတ်(၅)အတွဲ(၁) အမှတ်(၄)အတွဲ(၁) အမှတ်(၃)အတွဲ(၁) အမှတ်(၂)အတွဲ(၁) အမှတ်(၁)	ယနေ့1109မနေ့က1451တစ်ပတ်အတွင်း2560ယခင်သတင်းပတ်က11734တစ်လအတွင်3း4078ယခင်လက72912စုစုပေါင်း2884485Visitors Counter	Join us in Facebook Facebook Fanbox 1.5.x.0	ဆေးလိပ်ဖြတ်သူများ	Views : 1819 Favoured : 94
Share ဆေးလိပ်ဖြတ်သူများ ဆေးလိပ်သောက်သူတွေကြားမှာငါဒီနေ့ဆေးလိပ်မသောက်သေးဘူးကွ ဆိုတဲ့စကားကကြွားဝါစရာတစ်ခု ဖြစ်လိုဖြစ်၊ဒီနေ့ငါ တစ်ဗူးကုန်သွားပြီဆိုတာကလည်းတကယ်ကိုရှိန်စရာ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လိုဖြစ်၊ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကို အဆီခံလောက်တောင် မခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓါတ်နဲ့မကြာခဏကြွေးကြော်လိုက် မကြာခဏပဲ ကျရှုံးသွားလိုက်မီးခိုးငွေ့သံသရာလည်နေလိုက်ပုံ၊ဟိုအဆိုတော် ဆေးလိပ်ဖြတ်မယ် အရက်လည်းဖြတ်မယ် ငါနင့်လဲဖြတ်ပစ်မယ် အော်နေချိန်မှာဒီလူတွေက ဆေးလိပ်ချမယ် အရက်လည်းချမယ် …. အင်း အဲဒါပါပဲ၊မိုက်လုံးကြီးပုံက ဖွာလိုက်တဲ့မီးခိုး ရှိုက်လုံးကြီးတွေအတိုင်းခံတွင်းချဉ်လို့ပါ၊ တခုခုလိုနေလို့ပါ၊ အကျင့်ပါနေလို့ပါ၊ကမ္ဘာမြေထုထက် ကြီးကျယ်ခိုင်မာတဲ့ ဆင်ခြေတွေကို ပါးစပ်မှာတပ်ပြီး ဖွာရှိုက်ကြ၊ဟိုတံဆိပ်ကမကောင်းဘူး၊ ဒီတံဆိပ်ကဘယ်လို၊ ငါက ဒါမျိုးမှသောက်တာတစ်ဖွာလောက်ပေးစမ်းပါကွာ မနေနိုင်တော့လို့ လုပ်ပါ၊ပီကေစားတဲ့သူနဲ့ လော်လီပေါ့ ငုံတဲ့သူနဲ့ ဘယ်သူဘယ်နှစ်လကြာလို့လဲ၂၀၁၀ မှာဖြတ်ပြီး ၂၀၁၀မှာပဲ အော်လိုက်တယ် ဟေ့ဒီကို ရူဘီတစ်ပွဲ ..၊နိုင်ငံခြားဆေးလိပ်ဘူးတွေမှာပါတဲ့ ပုံဆိုးပန်းပျက်တွေကလည်း ကိုယ်နဲ့ပဲမဆိုင်သလိုလိုလူ့ဘ၀တိုတိုကို ဆေးလိပ်တိုတိုနဲ့ ဖြည်းဖြည်းလေး မှုတ်ထုတ် ဟူး…. စိတ်ထွက်ပေါက်ပါဗျာတဲ့သေနေ့စေ့ရင် သေမယ့်အတူတူ သူများအပြောအဆိုကလဲ ခံရသေးသကို…၊၆တန်းနှစ်၊ အိမ်နောက်ဖေး၊ လန်ဒန်၊ မီးခြစ်၊ လူကြီးတွေမရှိ၊ ဖွာရှိုက်၊ မူးလဲ၊အဲဒီကတည်းကစပြီး ခဏနားသွားတဲ့ မီးခိုးငွေ့ဇာတ်လမ်းက၁၀ တန်းအရောက်မှာ နုတ်ခမ်းထောင့်တွဲလဲခိုတဲ့အထာနဲ့ မျက်လုံးလေးမှေးလိုက်မယ် နုတ်ခမ်းကတခြမ်းထဲမဲ့ပြုံးတီဗွီထဲကကောင်နဲ့ ဘယ်သူပိုလန်းသလဲကြည့်လေ၊အင်တာနက်မှာရှာကြည့် benefits of smoking ဆိုပြီးတော့မရမကရှာရင်တွေ့လိမ့်မယ် it can reduce the stress တဲ့၊ကျွန်တော်တို့က တံဆိပ်ရွေးတဲ့ ပိုးဖလံတွေဖြစ်တယ်မီးတောက်တိုင်း ၀င်တိုးတာမဟုတ်ဘူး၊အရောင် အဆင်း အနံ့ အရသာ အထိအတွေ့ကအစမိုက်သက်အရသိတယ်၊ပြောရင်းဆိုရင်း ဂုဏ်ယူသလို လေသံကထွက်နေပြန်တော့မှကိုယ့်မိုက်တွင်းဘယ်လောက်နက်သလဲဆန်းစစ်ကြည့်ခပ်တိမ်တိမ်ဆိုရင် ပြာခွက်လုပ်မလားတောင်စဉ်းစားမိ၊ဒူးယား သွားပြီ၊ လန်ဒန် သွားပြီ၊ ဗီးဂပ်စ် မှိန်မှိန်၊ ဗွီမထင်ရှား၊ပရီမီယမ် မခိုင်မာ၊ အနီနဲ့အပြာေ၀၀ါး၊ ဒိုင်းမွန်းအာ ဖေါ်အဲဗား၊ ဘယ်လိုလဲ ရူဘီချစ်သား..မီးခိုးဈေးကွက်ထိုးစစ်ကြားက ခပ်ပြုံးပြုံး ဓါးစာခံ သူကောင်းသားတို့မှာကွာလတီ နပ်မမှန်တာတောင် ရွေးချယ်စရာမရှိလို့တစ်လိပ်ပစ်ချ နောက်တစ်လိပ် မီးညှိနေရတာတကယ် ဟိုကောင် ချောင်ပိတ်ရိုက်ခံနေရသလို…၊No Smoking ဆိုရင် တချို့က Anytime လို့ ထပ်ရေးတယ်ဒီလူတွေက No Smoking အနောက်မှာ Without Fire ပဲ၊ဖြတ်သန်းမှုစရိုက်အရ သဘာဝကျချင်တဲ့အခါဖက်ကြမ်းလဲ ခဲသင့်ခဲခဲ့တယ်၊ ဆေးရွက်က တခါတလေခြောက်တယ်၊တထောက်ထောက် လက်ညှိုးနဲ့တောက်လို့ပုဆိုးကို မီးမပေါက်ဖူးရင် ဆေးလိပ်သမားမပီသသလိုလို..၊ဘုန်းကြီးတစ္ဆေထက်လည်းဆိုးရဲ့ကိုယ့်ကျိန်စာ ကိုယ်မိနေတဲ့ မတောက်တခေါက် မှော်ဆရာလိုအနာသိလျက် ဆေးမရှိကြပုံများကိုယ့်ကိုကိုယ်ကလွဲလို့ ဘယ်သူကမှ သနားကြမယ်မထင်ပါဘူးလေ…။ ဂယက် Users' Comments Average user rating
Display4of4comments	1. 29-08-2012 00:54
johnsoe	2. 26-12-2011 11:33
မှ မဟုတ်တာ။ ကဗျာတပုဒ်ပ
lwin	3. 08-07-2011 23:51
းပြီး နောက် ၆ လလောက် ဆေးလိပ်ပြတ
်သွားတယ်... ခုတော့လဲ... နုတ်ခမ်းပေ
ဂယက်	4. 04-05-2011 17:26
ပါတယ်။ ဒါပေမယ် မပြတ်နိုင်
လို့ သောက်နေတဲ့ သူတွေချည်
။ အရက် အကြောင်းကိ
kyaw Gyi	Display4of4comments
Add your commentmXcomment 1.0.8 © 2007-2013 - visualclinic.frLicense Creative Commons - Some rights reserved	ဆေးလိပ်ဖြတ်သူများ	Saturday, 01 May 2010 20:16	Currently 2.38/5 12345 Rating 2.4/5 (24 votes) < Prev